‘Iyi yava nhamo yemunhu wose’ | Kwayedza
‘Iyi yava nhamo yemunhu wose’
31 Jul, 2020 - 00:07	 2020-07-31T02:09:13+00:00 2020-07-31T00:11:00+00:00 0 Views
Senator Joseph Chirongoma avo vanomirira dunhu reMashonaland West vaida kuziva matanho ari kutorwa neHurumende kune vasiri kutevedza kurudziro iri kupihwa yakadai sekuti kana pari parufu vanhu vanoungana havafanire kudarika 50. Sen Chirongoma vanoti kune dzimwe nzvimbo dzekumaruwa, vanhu vanenge vari parufu vanodarika 50 avo vanotenderwa pasi pemutemo.
Prof Murwira vanoti Hurumende yakadzika mitemo iri maringe nekurwisa kupararira kweCovid-19 iyo inofanirwa kutevedzwa. “Mimwe yemitemo iyi inorambidza kuungana kwevanhu. Vanhu havafanire kuungana vakawanda, vanofanirwa kupfeka mamasiki, vazora masanitizers uye vachigeza mawoko, zvichingodaro.
Zimbabwe pari zvino yave nevanhu 2 817 vawanikwa vaine Covid-19 mushure mekuvhenekwa.
Pahuwandu uhu, 604 vakatonaya asi vamwe 40 vakafa.
“Maringe nemutemo, zvinhu zvakajeka chose kuti tinofanirwa kunge tichiita sei,” vanodaro..